Shirka Wadatashiga oo maalintii labaad galay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka Wadatashiga oo maalintii labaad galay
Waxaa maalintiisii labaad galay Shirka Golaha Wada Tashiga Qaran ee shalay ka furmay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkaan oo ay ka qeyb galayaan, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda Shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa diiradda lagu saarayaa dardar gelinta doorashada.
Waxaa la filayaa in Guddiga farsamada ee uu Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta u magacaabay farsamada Doorashooyinka ay maanta hordhigi doonaan Golaha Wadatashiga, Qorshayaasha iyo hannaanka ay u dajiyeen doorashada.
Shirkaan oo ah midkii labadaad ee uu garwadeyn ka yahy RW Rooble, ayaa u muuqda mid ka qabow dhamaan shirarkii hore, waxaana lagu saari doonaa Jadwal cusub oo doorasho maadaama uu fashilmay jadwalkii hore.
Shirkaan waxaa sidoo kale, mar kale looga hadli doonaa arrinka goboolka Gedo, waxaa lagu magacaabi doonaa Guddiga dib u heshiisiinta Heerka Wasiir ee afarta Dowlad Goboleed oo aan ku jirin Jubbaland, kuwaas oo degmada Garbahaarey u tagaya xallinta arrinta gobolka Gedo.
Af-hayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimuu, ayaa dhawaan beeniyay warar soo baxayay oo sheegay in wax ka badel lagu sameyn doono heshiiskii 27 May, lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Lama oga xilliga uu qaadan doono shirkaan, waxaase la rumeysan yahay in ay ka soo bixi karaan go’aanno rasmi ah oo loo dhan yahay.
Isku day aan hirgalin oo muddo kordhin iyo boob doorasho salka ku hayay ayaa sababay in doorashooyinka dalka ay laba mar dib uga dhacaan xilligii loo qorsheeyay.